Aha aha: Igwe anaghị agba nchara igwe anaghị agba nchara
Ihe: PP +201 igwe anaghị agba nchara
Ikike: 0.7L 1.4L 2.1L 2.8L
Nha: 700ml 8.8 * 13.2
Agba: ahịhịa ndụ ndụ ìhè pink pink acha anụnụ anụnụ
Ahịa: USD0.5 / PC -2.4 / PC
Multilayer mkpuchi igbe
Aha aha: multilayer mkpuchi igbe
Militer: otu akwa, okpukpu abụọ, okpukpu atọ na okpukpu anọ
Agba: pink, ọcha, acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ike ahaziri
Ngwaahịa ngwaahịa: oriri oriri ígwè, eyi ihe
Atụmatụ: Igwe anaghị agba nchara ihe eji eme ihe, ihe mkpuchi gburugburu ebe obibi ihe mkpuchi gburugburu ebe obibi, gburugburu ebe obibi resin dị elu na-eguzogide corrosion, agba agba adịghị mfe iyi
1. Ahụ ike
2. PP shei
3. Akpa oyi akwa akara
4. Layered imewe
5. Ofu bayoneti
6. Heat mkpuchi na ikpo ọkụ
7. Ezigbo-abụghị skid ala, mụ na-abụghị skid pụrụ isi chọta.
Ngwongwo igwe anaghị edozi, na-enwu enyo dị ka enyo, na-eguzogide corrosion na-adịgide adịgide, na-ekpuchi mkpuchi akara, arụnyere na akara mkpuchi mbụ adịghị awụpụ, nhazi okporo ụzọ, ọ naghị adị mfe ịgafe uto, nwere ike idowe nri mbụ nke nri ahụ, imewe abụọ , mkpuchi mkpuchi ọkụ ma dị ọkụ, ojiji dị mma, mgbanwe agba, akara oghere ikuku, mkpuchi PP dị arọ.
A na-enye igbe nchekwa nri ehihie na igbe mkpuchi ọkụ na igbe igbe nri ehihie, na okpukpu abụọ nke ime na n'èzí jupụtara na plastik ụfụfụ, mgbe ahụ, a na-ekpuchi ihe mkpuchi dị n'ime ya na ihe nkiri igwe. Belata ọkụ ọkụ sitere na conduction, radieshon na convection. A na-etinye ngwaọrụ kpo oku eletrik n'etiti igbe nri ehihie na shei iji gbakwunye ụfụ ọkụ ma debe nri ahụ na oke okpomọkụ.
Ọ na-egosipụta oge ịchekwa ọkụ ogologo oge, enwere ike reheated mgbe ịchọrọ iri; ọdịdị ejiji, obere; jiri ya tụnyere ahịa nke igbe nchekwa ehihie, ọnụahịa dị oke ọnụ, ngwaahịa a na-acha akwụkwọ ndụ, nchekwa ọkụ na mma.
Nke gara aga: Igbe nri ehihie
Osote: Igwe anaghị agba nchara 304 n'ime na n'èzí
Lunch Igbe Thermos
School Lunch Bento Igbe
Igbe nri ehihie Thermos
Igbe Nri ehihie agụụ